Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2762 - 2763 | XperimentalHamid
Funda Isahluko 2762 - 2763 yenoveli Indodana kaMillionaire eMthethweni by INkosi Leaf mahhala online.
Ngokubona ukuthi uZhongquan akasenazo izinkathazo zakhe zangaphambilini, uCharlie uthe: “Uma kungekho okunye, ngizoqala ngivale ucingo, futhi sengikhathele izinkinga ezisendleleni, ngakho-ke kufanele ngiphumule kahle.”
UZhongquan uthe ngokujaha, “Kulungile, kahle, kahle. Phumula kancane kuqala, umkhulu ngeke akunhluphe! ”
UCharlie wayesezovala ucingo, wavele wakhumbula okuthile, wathi, “Hawu, yebo, ngihlela ukwenza ezokuhamba olwandle. Ngokuzayo, umndeni wakwaWade ngeke ukhulume nami noma uzame ukuwuhlwitha? ”
"Ini?" UZhongquan ubabaze: “Nizothutha izinto zasolwandle?”
"Yebo." UCharlie uthe kancane: “Sekuvele kuyazilungiselela. Ngizokutshela ngemuva kokuqala kwephrojekthi. Lapho isikhathi sifika, lapho-ke ngizothatha izinzuzo ezikhishwe emndenini wakwaSu. Ngaphezu kwalokho, emakethe eseningizimu yoMfula iYangtze, ngethemba ukuthi umndeni wakwaWade ngeke uze ukuzolamula. ”
UZhongquan wanqikaza isikhashana, waluma inhlamvu, wavuma, “Kulungile! Kulokhu, lapho-ke ngizokuxhasa ngokuphelele ekuqalekeni ibhizinisi kuleyo ngxenye. ”
"Kulungile," kusho uCharlie: "Uma kunjalo, bese uvala ucingo,"
Wavala ucingo uZhongquan enemizwa exubile.
ULeon ohlangothini ulalele buthule, wathi uma embona evala ucingo, wabuza, “Master, wathini?”
Cishe uZhongquan ukuphindile lokho abekushilo noCharlie ocingweni manje.
Ngemuva kwalokho, wabubula: “UMaster Charlie uyamangalisa ngempela. Waya eSyria eyedwa, waze wabiza nomphathi wamabutho aphikisayo ngomzalwane, wabuye wacela uZynn ukuthi akhafulele izigidi eziyikhulu zamadola aseMelika kwelinye iqembu. Lokhu kufana nokuhlakulela oxhumana nabo baphesheya kwezilwandle. Kulokhu, uZynn wanyamalala, nokulahlekelwa isimungulu komndeni wakwaSu kuyaphela. ”
Ngemuva kokukhuluma, uthe ngokucasula okuthile: “Ukuthi nje uCharlie uvele wathi uzozibandakanya kwezokuhamba olwandle futhi unethemba lokuthi angizukuphazamisa ibhizinisi lakwaJthe endaweni yakhe. Ekuqaleni bengifuna ukusebenzisa leli thuba ukubamba le ngxenye yemakethe yebhizinisi likaSu, kodwa uyayifuna, futhi kufanele ngiyinike yena. Ngale ndlela, sizohlupheka kakhulu ... .. ”
ULeon wambuza: “Manje uzokwenzenjani?”
UZhongquan uthe akasizi ngalutho: “Ngeke ngiwunyakazise okwamanje umndeni wakwaSu. Ake sibone ukuthi angakwenza yini. Kungaba yinto enhle uma engasebenzisa ngokunenzuzo lo mkhuba ukuwenza ube mkhulu. Ngemuva kwalokho ngingamnika imakethe yezokuthutha eningizimu, kepha Ngaleso sikhathi, kufanele kube nemibandela. Ngizosebenzisa lesi sikhala semakethe ukuze abuyele emndenini wakwaWade ngendlela efanele. ”
Okwamanje, uChengfeng ulinde umyalezo kaZhongquan ngenkathi enxusa abangaphansi kwakhe ukuthi baqoqe izinkomba.
Kodwa-ke, njengalapho uShoude enyamalala, i-Aurous Hill iyimbobo emnyama, ishwabadela amadodana akhe amabili nayo yonke imininingwane ehlobene nawo.
Ngalesi sikhathi, u-Anson ubike isiqeshana sezindaba: “Mphathi, umphathi omkhulu uhlele izindaba zezimali zenkampani yaphesheya kwezilwandle namhlanje ekuseni wadlulisela izigidi eziyi-100 zamadola aseMelika kwi-akhawunti yasebhange laseSwitzerland!”
"Ini?!" UChengfeng ubabaze: “Sheshisa. Ngihlole! Bona ukuthi i-akhawunti eyamukelayo ingekabani! ”
U-Anson uthe akasizi ngalutho: “Mphathi, lokhu akutholakali. Isizathu esikhulu esenza i-UBS ithandwe emhlabeni wonke futhi yasinda kuze kube namuhla ukuvikela ubumfihlo bamakhasimende. Akunakwenzeka ukuthola ukuthi ngubani ozihlolayo. ”
Ngemuva kwalokho u-Anson wanezela: “Kodwa-ke i-UBS yaphoqeleka ukuthi isayine izivumelwano namanye amazwe. Ngaphansi kwezimo ezithile ezikhethekile, ingahlinzeka ngezinsizakalo emazweni athile. Imininingwane yekhasimende, kepha lokhu kukhawulelwe nasezingeni likazwelonke. Uma ungathola ubudlelwano ngenhla, kungenzeka… ”
“Alikho…” UChengfeng ushaye izindebe zakhe: “Abantu ezweni lonke bakhona. Engithethisa, nginemibono eminingi evela phezulu. Abangibuzi ngqo ukuthi ngichaze esikhathini esedlule. Sengivele ngishisa impepho. Uma ngiya kubo ngiyocela usizo ngalesi sikhathi, ngabe angisishayi isibhamu? ”
U-Anson uthe akasizi ngalutho: “Ngaleso sikhathi kungenzeka ukuthi ayikho enye indlela…”
UChengfeng wahwaqabala, futhi wabubula: “Angiqondi kahle, njengoba kunamathuba angama-80% okuthi uZynn awele ezandleni zomndeni wakwaWade, pho yini iphuzu lokwenza le mali eyizigidi eziyi-100 emndenini wakwaSu? Abakwazi ukunakekela ngemali encane kangako…
U-Anson uvule umlomo wathi: "Mhlawumbe yibhomu lentuthu abalikhiphe ngamabomu?"
"Ibhomu lentuthu?" UChengfeng wamangala ngokwengeziwe, wathi: “Akujabulisi ukuba nalolu hlobo lwebhomu lentuthu? … ”
Lapho nje uChengfeng udidekile, uZhongquan wafona.
UChengfeng uxhume ngejubane, futhi wamemeza: “Zhongquan, iphi indodana yami!”
UZhongquan ukhulume wathula wathi: “Chengfeng, ngazi kanjani ukuthi indodana yakho ikuphi?”
UChengfeng uqalekisile: “Wena fcuking fcuk, ukuzwana nami uyisihluku uHu ?! Indodana yami inyamalale e-Shangri-La Hotel yakho! Wena fcuking ungitshele ukuthi awazi? ”
UZhongquan ube esexwayisa ngokushesha, “Chengfeng, akulona igazi eliningi kangaka! Uthe indodana yakho inyamalale eShangri-La Hotel, ngivumela Abantu babheke yonke imininingwane yokungena eShangri-La, futhi alikho igama elinjengoZynn Su! Futhi ngicele abantu ukuthi babheke ividiyo yokuqashwa, ayikho imidwebo kaZynn ohlala eShangri-La. Ngisondeza umsolwa manje ngokujulile. Ingabe uthole iphutha kimi ngamabomu? Ngabe umenzile uZynn wafihla, wabe usubhala futhi uqondise indaba enjalo, bese ugijima uzongibuza imibuzo bese uqala impi nami? ”
UChengfeng wakuzwa lokhu. Kuthe kusenjalo waqhuma, waqhumisa wathi: “Yeka ukuqhwayiza [i-imeyili ivikelwe]! Ngicikeka kangaka ?! ”
UZhongquan waklolodela: “Ngubani owaziyo isihogo? Ngabe amaJapan awasebenzisanga isizathu esifanayo ngo-1937?! Bengingalindele. Ngemuva kweminyaka eminingi kangaka, ake izinto zakho zakudala zikufunde! ”
“Fcuk!” UChengfeng wagedla amazinyo ethukuthele: “Zhongquan, wena [i-imeyili ivikelwe] umama wakho!"
"Mina [i-imeyili ivikelwe]? ” UZhongquan ukhulume wathula wathi: “Indodana yakho iyimpande nje. angikaze ngiye eShangri-La, uzongibuza manje, lokhu akukhona ukuthola iphutha lokho? noma nini lapho indodana yakho ithuthela eShangri-La, ubuyela kimi, akukho engingakusho, indodana yakho ingafika ngaphambili?
Indodana yakho, uma ibingakaze ifike lapha ngaphambili, ungalokotha ungibumbe, ukholwe noma ungakholwa, ngizobiza amaphoyisa ngqo, noma simane siye kubantu abangaphezulu, ngibe nencazelo enhle phambi kwabo bona ukuthi ubani lo owenza ubuqili! ”
UChengfeng waphelelwa amazwi ngokushesha.
Kungaleso sikhathi kuphela lapho akhumbula khona ukuthi indodana yakhe yayiye e-Aurous Hill buthule, futhi ayishongo lutho ngayo.
Ngaphezu kwalokho, ngesikhathi engena, wacela ngokukhethekile abantu abangasebenzi ukuthi bavule igumbi, wabe esengena eShangri-La ngokuthula ngaphansi kwesembozo somuntu ayemethemba.
Okubaluleke kakhulu ukuthi akakaze aphume noma avele selokhu angena ehhotela. Kunengqondo ukuthi uShangri-La wayengeke azi ukuthi ukhona.
"Ngabe uZynn wanyamalala kanjani ?!"
"Kungenzeka yini ukuthi ... Akuwona yini umsebenzi owenziwe abakwaWade Family ngalesi sehlakalo?"
“Uma kungewona owakwaWade Family, kungaba ngubani……” Ngalesi sikhathi, uChengfeng wavele wacabanga ngendodana yakhe yesibili, uShoude.
Indodana yesibili, uShoude, yayinyamalale e-Aurous Hill International Hotel, futhi ihhotela lalingahlobene nakancane nomndeni wakwaWade.
Ngaphezu kwalokho, indlela aduka ngayo nayo yayixaka kakhulu, futhi wanyamalala kungazelelwe engashiyanga mkhondo.
Ngale ndlela, ukunyamalala kukaZynn kunomphumela ofanayo…
Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2764 - 2765